ပြည်ထောင်စုနေ့အမီ အပစ်အခတ် ရပ်စဲနိုင်မလား | ဧရာဝတီ
ထက်အောင်ကျော်| January 25, 2013 | Hits:12,783
လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်နေ့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ၆၆ ကြိမ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုလိုနီ နယ်ချဲ့ ဗြိတိသျှလက်အောက်က လွတ်လပ်ရေး အရယူနိုင်ဖို့အတွက် ပြည်မက ဗမာတွေနဲ့ တောင်တန်း ဒေသက လူမျိုးစုတွေ ( လူမျိုးစုအစား တိုင်းရင်းသားဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မီဒီယာတွေက အသုံးများနေ ပါတယ်) စုပေါင်းတွေ့ဆုံပြီး ရှမ်းပြည်နယ် ပင်လုံမြို့မှာ အဲဒီနေ့က လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ပြောမယ် ဆိုရင်တော့ ပြည်မနဲ့ တောင်တန်း ဒေသကလူတွေ ငြိမ်းချမ်းစွာ ပူးပေါင်းတဲ့နေ့ပေါ့။
ဒါပေမယ့် အခု ၆၆ နှစ်ကြာပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ အဲဒီပင်လုံမှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သူတွေ အချင်းချင်းဟာ အဲဒီပင်လုံနဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့အရပ်၊ အတိအကျ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကချင်ပြည်နယ် လိုင်ဇာဒေသမှာ အကြီးအကျယ် စစ်ပွဲဖြစ်နေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။
နိုင်ငံရေးအကဲခတ် အတော်များများကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆၆ နှစ်က လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ ပင်လုံစာချုပ်ပါ အချက်အလက်တွေကို လူများစု ဗမာတွေဘက်က၊ အတိအကျ ပြောရမယ်ဆိုရင် အာဏာကို တလျှောက်လုံး ရယူထားခဲ့တဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ တပ်မတော်ကို ကျောထာက်နောက်ခံ ယူထားတဲ့ အုပ်ချုပ်သူအစိုးရ အဆက်ဆက်က ပင်လုံစာချုပ်ပါ အချက်လက်တွေကို အကောင်ထည် ဖော်ပေးဖို့ ပျက်ကွက် နေတာကြောင့်လို့ ပြောပါတယ်။
အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး ကာလ ၁၇ နှစ်ကြာပြီးမှ စစ်ပြန်တိုက်နေတဲ့ KIO ကချင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေ ကိုယ်တိုင်ကလဲ KIA ကို နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းမယ့်အစား ပင်လုံစာချုပ်ပါ အချက်လက်တွေကို အကောင်ထည် ဖော်ပးမယ်ဆိုရင် ဒီကိစ္စ အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်လို့ အတိအလင်း တောင်းဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒါတွေက သမိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေပါ။ တထိုင်တည်း ဆွေးနွေးလို့ မပြီးနိုင်ပါဘူး။ အချိန်ယူ လုပ်ဆောင် ရမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်တွေပါ။ လက်ရှိ အစိုးရဘက်ကလည်း ဒါတွေကို ချက်ချင်း ထလုပ်မယ့်ပုံ မပေါ်သေးပါဘူး။
အစိုးရက ချက်ချင်းထလုပ်မယ့် ကိစ္စကတော့ လာမယ့် ၁၂ ရက် ပြည်ထောင်စုနေ့ကျရင် တနိုင်ငံလုံးအနှံ့ ပြည်ထောင်စုနေ့ အခန်းအနားတွေ ကျင်းပမယ်၊ ညစာစားပွဲ လုပ်မယ်၊ အဲဒီပွဲကိုတက်ဖို့ နိုင်ငံရေးပါတီ ခေါင်းဆောင်တွေကို ဖိတ်မယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ တုန်းကလဲ ဒါမျိုးလုပ်သွားတာဆိုတော့ အခုလဲ အဲဒီလိုပဲ လုပ်လိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရေးပါတီ ခေါင်းဆောင်တွေ၊ အထူးသဖြင့် လူမျိုးစုပါတီ ခေါင်းဆောင်တွေ ပြည်ထောင်စုနေ့ပွဲကို တက်ပါ့မလား။ တိုက်ပွဲတွေ သိပ်မပြင်းထန်သေးတဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ တုန်းကတောင် အထင်ကရ လူမျိုးစု ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦး မတက်ဘူးဆိုရင် အခုလို တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီး အရပ်သားတွေပါ သေဆုံးနေချိန်မှာ အဲဒီဖြစ်စဉ်ကို လျစ်လျူရှုပြီး နေပြည်တော်က ညစာစားပွဲမှာ ရှန်ပိန် လာသောက်ရဲတဲ့ လူမျိုးစုခေါင်းဆောင် ရှိပါဦးတော့မလား။
ကျနော် ဒီလိုပြောလိုက်လို့ ပြည်ထောင်စုနေ့ကို မှေးမိန်အောင် လုပ်တယ်လို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ တကယ်က ပြည်ထောင်စုနေ့ကို အနှစ်သာရပြည့်ဝစွာ ကျင်းပနိုင်ဖို့ နှိုးဆော်လိုက်ခြင်းသာ
ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်မနဲ့ တောင်တန်းဒေသပဲ ဆိုဆို၊ ဗမာနဲ့ လူမျိုးစုတွေပဲ ခေါ်ခေါ် သေချာတာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုတာဟာ နိုင်ငံတွင်းရှိသမျှ လူမျိုးစုအားလုံးနဲ့ နယ်မြေအားလုံးကို စုပေါင်းခေါ်ဆိုထားတာပါ။
ဒါကြောင့် ဗမာအများစုနေထိုင်တဲ့ နေပြည်တော်နဲ့ ရန်ကုန်မှာ ဒီမိုကရေစီအခွင့်ရေး အနည်းအကျဉ်း ရနေရုံနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတခုလုံး အေးချမ်းတည်ငြိမ်နေပြီ၊ တိုးတက်ဖွံဖြိုးနေပြီလို့ ပြောလို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ တနိုင်ငံလုံး ငြိမ်းချမ်းရေးရပြီး တနိုင်ငံလုံးအေးချမ်းတည်ငြိမ် ဖွံဖြိုးတိုးတက်လာမှသာ အားလုံးအဆင်ပြေမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
ဒါပေမယ့် ABSDF ကိုယ်တိုင် KIA နဲ့တွဲပြီး အစိုးရကို လက်နက်ကိုင် တော်လှန်နေတဲ့အတွက် စစ်ပွဲရပ် ဆိုင်းရေးကိစ္စမှာ ABSDF က ကြားဝင်ဆောင်ရွက်လို့တော့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒါဆိုရင် သူတို့နဲ့ မျိုးဆက်တခု တည်းဖြစ်တဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုရင် အသင့်တော်ဆုံးလို့ ထင်ပါတယ်။ ကိုမင်းကိုနိုင် ဦးဆောင်တဲ့ ၈၈ အဖွဲ့ဟာ ကချင်အပါဝင် လူမျိးစုလက်နက်ကိုင် ဒေသတွေဆီအထိ ထဲထဲဝင်ဝင်သွားရောက်လေ့လာနေသူတွေဖြစ်ပြီး တိုက်ပွဲကြီးတွေ မစမီအထိ လိုင်ဇာကို ရောက်ခဲ့သူ တွေပါ။
ဒါဆိုရင် ဒီစစ်ပွဲကို ချက်ချင်းရပ်ဖို့ တောင်းဆိုနေတဲ့ နေပြည်တော်က လွှတ်တော်အမတ်တွေ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တခု လိုင်ဇာအထိသွားပြီး ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်ကော အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး ရလာနိုင်မလား။ အထူးသဖြင့် လူအတော်များများ အကြံပေးနေတဲ့အတိုင်း NLD ပါတီဥက္ကဌ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်က အဲဒီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို ဦးဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင် တကယ် အပစ်ခတ်ရပ်စဲပြိး ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ ဖြစ်လာနိုင်မလား။
ငြိမ်းချမ်းရေး မအောင်မြင်လျှင် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မသေချာနိုင်ဟု ဦးသိန်းစိန် သတိပေးဒီမိုကရက်တစ် နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်မှု အားနည်းနေသည်ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးနှင့် အရှင်ဂမ္ဘီရအာဖဂန်နစ္စတန်မှ အာဏာခွဲဝေရေး နမူနာရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရ လူမှန်နေရာမှန် ဖြစ်လာနိုင်မလား
ဂျာနော် January 25, 2013 - 11:01 am သတင်းဌာနများ သတင်းကိုမျှမျှတတ ပြည်သူတွေကို တင်ပေးသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်မီးမလောင် သော်လည်း မီးလောင်မှုကိုအားပေးသည့် အောက်စီဂျင်လို မဖြစ်စေချင်ပါ။ကျွန်တော်တို့ ကချင်ပြည်နယ် နယ်စပ်ကို လာပြီး ကေအိုင်အေရဲ့ မကောင်းကြောင်း၊ စစ်တပ်မကောင်းကြောင်း ပြည်သူလူထု အားလုံးကို လိုက်မေးသင့်ပါ တယ်။
Reply မင်းအားကောင်း January 25, 2013 - 11:54 am ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗယ်ဆုရှင် ဒေါ်စုက ပါးစပ်တောင် မဟရဲဘူး။
ဒေါ်စုဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဖေါ်ဆောင်မပေးတာတောင်မှ ကချင်ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းရေးစကား တောင် မဖွင့်ဟရဲဘူး ဒေါ်စုက ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဗယ်ဆုနဲ့မထိုက်သန်ဘူး ကန့်ကွက်ရမယ်။
သိန်းစိန်လည်း ထိုင်းနိုင်ငံတက္ကသိုလ်မှ ဘာဘွဲ့ကိုယ် ရည်ရွယ်ပြီး အပ်နှင်းခဲ့သလဲ နားမလည်
နိုင်ဘူးကွာ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံ့ဘို့ ရည်ရွယ်ပြီး သ်ိန်းစိန်အနေဖြင့် ချီးမြှင့်လိုက်တာလား။
ဝန်ကြီးထုတ်ပြန်ချက်လည်းသြဇာမရှိဘူး။ ဒါက သိန်းစိန်နဲ့ မင်းအောင်လှိုင် ဇာတ်တိုက်ထားပြီးသားပါ။
Reply swe htwe January 25, 2013 - 2:34 pm Hi, Htet Ag Kyaw we think your idea isnot complete. We think KIO conflict isadifferent issue. It is notagenocide. I am notaburmese and I am living in border areas. We think both sides are to be blamed. We suspect that KIO really want peace. KIA leaders are also dictators just like Than Shwe and Nay Win. They are very rich now.
Reply AunG January 26, 2013 - 7:49 am swe htwe, i strongly opposed your comment because of yours False accusation to KIO/KIA Leaders. KIO/KIA Leaders are Honourable Leaders for Kachin Peoples, Kachin Land and also KIO/KIA Leaders have Respect from Minorities Tribes and Pro-Democracy Peoples of Burma. Definietly, Burma/Bama army generals and leaders are the same…in fact, they are Bad, Selfish and Idiot…
Reply swe htwe January 26, 2013 - 2:27 pm If you want to find the truth, you should survey shan,leshu,rawan and burmese living in kachin state. The survey should be done by honourable third person ,not by arms.
Reply AunG January 26, 2013 - 10:01 pm I know very well in ‘what you mean’ . no need to support KIO/KIA 100% from Kachin State Peoples. The Really Point is Majorities and 90% of Kachin States Peoples fully support to KIO. You have to know one thing, Obama only get support and ballot from 50% American Peoples but he win because of real democracy [ not same as burma democracy].
Reply swe htwe January 27, 2013 - 6:55 pm Are you sure ??? I only want peace.
R.zar January 26, 2013 - 3:02 pm မင်းအောင်လှိုင် က ငြိမ်းချမ်းရေး မရချင်တာပါ။ ပြည်တွင်းစစ် ဆိုတာ စစ်တပ် က လူတွေကြောင့် သက်ဆိုးရှည်နေရတာပါ။
ပင်လုံစာချုပ်ဆိုတာ စစ်တပ် ကလူတွေ ပါဝင်ချုပ်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ခင်ဗျား သတိရှိရင် ခင်ဗျား နာမည်ဖေါ်ပြီး အော်လိုက် ။
ဂဠုန်ဦးစော စိတ်ဓါတ်နဲ့ အော်လိုက်။
Reply ဒေါက်တာဂုတ်ကြား January 25, 2013 - 5:28 pm တရားမျှတမှု့မရှိ၊ ရိုးသားမှု့ကင်းတဲ့ ဦးအောင်မင်း၊ ဦးစိုးသိန်း၊ ဦးခင်ရီ နဲ့ လက်စွဲတော်လှမောင်ရွှေ တို့ဦးစီးတဲ့ Pace Mission ကဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။
Reply AunG January 28, 2013 - 12:37 pm First, all burma army troops must retreat from their battle front posts ,and automatically cease fire will become…,Second, all burma army troops should getout from Kachin Land, then Peace will be full in Kachin Land…,Third, KIO/UNFC and Burma Army Generals/Leaders will need negociate in Third Country , front of UN / International Deligates and the end of Treaty of Agreement by International Law. This Three Steps are Very Importants to gain Forever Peace for United States of Burma Federation. But Unfortunately, In Fact in History , all burma army generals/leaders are Selfish, Mad , Untrustworthy ,Crook because they Really Don’t Love Their Mother Land and They [Burma Army Generals/Leaders] Really Don’t Want, Monther Land will be Peacefully, Development, Beautiful Nation and also Burma will become Proudly Country in around the world…
Reply Salai Lian January 29, 2013 - 3:24 pm Celebrating Union Day without respecting the articles of the Panglong Agreement Treaty will make nonsense. Burmese junta better not to use the name “Union” or “Union Day” as long as it adopts and respects The Panglong Treaty which was the very foundation of forming the Union. We have been insulted and hurt since the Union was betrayed by the Burman dominated government since the death of General Aung San. Union of Burma which is still our dream-house must be restored without delay by the current junta.
Reply ကောင်းစေချင် January 29, 2013 - 9:55 pm မဟုတ်သေးပါဘူးနော်၊စစ်တပ်ကိုချည်းပြောနေကြတာလား။KIA ကရောငြိမ်းချမ်းရေးလိုချင်လားလို့မေးမကြည့်ကြတော့ဘူးလား။ KIA ကသာအပစ်ရပ်ချင်၊ငြိမ်း
ချမ်းရေးတကယ်လိုချင်ရင် အခုပြောလိုက်ပါကချင်ပြည်နယ်ခုချက်ခြင်းအေးချမ်းသွားမယ်။သူတို့သဘောထားကိုတရားဝင်ကြေညာပါစေအုံး။ စစ်တပ်ကသူတို့အပစ်မရပ်ချင်ပါဘူးပြောနေတဲ့ဟာကိုတစ်ဖက်သတ်ကြီးရပ်
တယ်။ဗျူဟာအရအကြောင်းပြပြီး လမ်းတံတားဖျက်၊ မိုင်းထောင်ချောင်းမပစ်ကြပါနဲ့လို့တားပေးဖို့သတိမရပဲ တပ်ကိုအပြစ်ပြောရင်ပေါ်ပင်လူ
Reply ချစ်မောင်(အာရက္ခ) February 12, 2013 - 8:20 pm “KIA ကသာအပစ်ရပ်ချင်၊ငြိမ်း
အဲဒီလို KIA ကသာ ငြိမ်းချမ်းရေးလိုချင်တိုင်းရမယ်ဆို၇င် ငြိမ်းချမ်းနေတာ ကြာလှပေါ့ ဘယ်ရာမှာ ဆို မျက်လုံး တစ်ဘက်တည်းနဲ့ မကြည့်ပါနဲ့ အဘက်ဘက်က ကြည့်ပါ ပိုလိုကသေချာသွားအောင် ကချင်ပြည့်ကို ဆင်းလို့ကြည့်ပေါ့ သူတို့ဘယ်လို ခံစားနေရတယ်ဆိုတာကို
KIA အစိုးရနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ချုပ်လိုက်တယ် ဒါပေမဲ့ သူတို့လိုချင်တဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကို မလိုက်လျောခဲ့ဘူးလေ ဒါကြောင့် အခုလို ပြန်တိုက်နေရတာပေါ့
KIA လိုချင်တာကသူတို့ပြည်ကို သူတို့ ပြည်က ထွက်တဲ့ အရင်းအမြစ်တွေ တွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေကို သူတို့ကိုယ်တိုင် ရပိုင်ခွင့်ရှိချင်တာ သူတို့ပြည်ကို သူတို့ကိုယ်တိုင် တိုးတက် အောင်လုပ်ခွင့်လိုချင်တာ ဖယ်ဒရယ်စနစ်ကို လိုချင်တာည်ြထောင်စုစစ်စစ်ကို လိုချင်တာ ၀ီလဆင်ရဲ့ ကိုယ့်ကံကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးရေးဆိုတာပေါ့
အခုတော့ ကချင်က ထွက်တဲ့ ကျောက်စိမ်း ကချင်တွေရပိုင်ခွင့် ရှိလို့လား တန်းတူညီမျှခွင့်ရှိလို့လားပြောရရငတော့ အများကြီးပါပဲ
အစိုးရက အားလုံးကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားချင်တာ ဖယ်ဒရယ်ပေးလိုက်ရင် ပြည်ထောင်စု
( ပြည်ထောင်စုအမည်ခံရုံ)ပြိုကွဲသွားမယ်လို့ချည်းမှတ်နေတာ အခု
Reply yemyin January 30, 2013 - 9:50 am This is the problem of 2008 constitution.Because of constitution every president come from army . So,every presidents have fighting ethic.Unfortunately,Myanmar face the internal land fighting (Not country to country) due to the constitutional error.I sympathize all of Myanmar people (Include all races). Every government lead in Mynmar by army (in or ex) is never ever get for peace.This is universal truth.
Reply emerald February 4, 2013 - 5:42 pm နိုင်ငံရေးအကဲခတ် အတော်များများကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆၆ နှစ်က လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ ပင်လုံစာချုပ်ပါ အချက်အလက်တွေကို လူများစု ဗမာတွေဘက်က၊ အတိအကျ ပြောရမယ်ဆိုရင် အာဏာကို တလျှောက်လုံး ရယူထားခဲ့တဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ တပ်မတော်ကို ကျောထာက်နောက်ခံ ယူထားတဲ့ အုပ်ချုပ်သူအစိုးရ အဆက်ဆက်က ပင်လုံစာချုပ်ပါ အချက်လက်တွေကို အကောင်ထည် ဖော်ပေးဖို့ ပျက်ကွက် နေတာကြောင့်လို့ ပြောပါတယ်။
အဲဒီယူဆချက်ကိုလက်မခံချင်ပါ။ဘာလို့ လဲဆိုတော့လွတ်လပ်ရေးရရချင်းမှာ ပင်လုံအတိုင်းအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။အပြည့်အဝဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။ဒါပေမယ့် လွတ်လပ်ရေးရပြီးလပိုင်းမှာဘဲ တိုင်းပြည်အခြေအနေဆိုးရွား လာတယ်။ ကွန်မြူနစ်သူပုန်ထတယ်။အဲဒီမှာဗမာ့တပ်မတော်ထဲက ကချင်နဲ့ ကရင် ကအတိအလင်းခွဲထွက်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။ဗမာတပ်မတော်နဲ့ဦးနုအစိုးရ က ရန်ကုန်အစိုးရလို့ ခေါ်ရလောက်အောင်အခြေအနေဆိုးတယ်။အဲဒီအခြေအနေမှာ ပင်လုံကိုဘယ်လိုအကောင်အထည်ဆက်ဖော်မလဲ။ အဲဒီကတည်းက ကချင်နဲ့ ကရင်လက်နက်ကိုင်တွေ ဟာ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်နဲ့ ပင်လုံအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့မယ်ဆိုရင်(သူတို့ ပါအစိုးရနဲ့ လက်တွဲပြီးကွန်မြူနစ်တွေကို တိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်) ပင်လုံကပိုပီပြင်မှာပါ။အဲဒီတော့ ပင်လုံကိုစတင်ချိုးဖောက်တာ တိုင်းရင်းသားပါ။
တပ်မတော်ကလဲ တိုင်းရင်းသားအားလုံးပါဝင်တဲ့တပ်မတော်(ဒါပေမယ့်အဲဒီလက်နက်နဲ့ ပြည်ထောင်စုကိုတည်မြဲအောင်ပီပြင်အောင်မတည်ဆောက်ဘဲ အဲဒီလက်နက်နဲ့ ခွဲထွက်ဖို့ ကြိုးစားတယ်)၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှာ သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်လူမျိုးအလိုက်ပါဝင်ခဲ့တယ်။ဒါအစဘဲရှိသေးတယ်နော်။ဒါပေမယ့်ခွဲထွက်ချင်တဲ့သူက အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှာတာပါဘဲ။နောက်တော့ ရှမ်းမူပေါ်လာတယ်။အဲဒီမှာအာဏာသိမ်းတာဘဲ။ကေအိုင်အို ရဲ့ အမျိုးသားညီလာခံမှတင်တဲ့အချက်၁၉ ချက်မှာပါပြီးသားပါ။ ပင်လုံက တစ်ပြည်ထောင်မူဆိုပြီးတော့၊ပင်လုံကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ ဖြစ်သင့်တာက ပင်လုံအတိုင်း ၁၀ နှစ်လောက်နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်အောင်တိုင်းပြည်ကိုတည်ဆောက်၊နောက်မှ ဖက်ဒရယ်ကို သွားရနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီမှာအဲဒီလောက်အချိန်မစောင့်နိုင်ဘဲ ကွန်မြူနစ်ဆန်ဆန် တိုက်ယူမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးပေါက်ခဲ့ပုံရပါတယ်။ အဲဒီတော့ တစ်ဘက်နဲ့ တစ်ဘက်မယုံဖြစ်လာတာပေါ့။ရှင်းရှင်းလေးပါ။ပင်လုံကြောင့်မဟုတ်ဘူး